Mgbasa ozi | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Mgbasa ozi
Akwụkwọ eji ere ahia bu ... Imeputa akwukwo ahia. Mmepụta akwukwo ohuru
Ndị ọchụnta ego na-aghota mkpa ọ dị iwulite otu njikọ ụlọ ọrụ. Ghọta ụlọ ọrụ site na akara ụlọ ọrụ, agba, akara ngosi na-eweta ezigbo uru. Ka ị ghara ịdabere na ohere, ịkwesịrị ịhazi ihe niile ...
Nnukwu akwụkwọ a na-ebipụta
Ihe na 27.08.2019
Mmpụta nke teknụzụ ọhụụ obibi akwụkwọ ọhụrụ nwere ike imeziwanye mbipụta obibi akwụkwọ nke ọma ma na-eme ka ogo ha saa mbara. N'etiti ha, akwụkwọ mbipụta sublimation pụtara ìhè kachasị, ihe dị mkpa bụ nke itinye ihe onyonyo nke ngwaahịa na ngwaahịa si ...
Ihe nkesa PR nke SAMP: ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke oma
Ihe na 19.08.2019
N'oge na-adịghị anya, ndị ọrụ nlekọta ihe nchịkwa niile nwere mmasị na ajụjụ a: "Olee otu esi akwalite sava GTA: SAMP?" Enwere ike ekewa PR nke ihe nkesa SAMP na ọnọdụ abụọ. Nke mbu, obu ihe kari, - ...
Esi mee ka mpeepe na Photoshop ma mee ya n'onwe gị
Ihe na 13.06.2019
Kedu ka esi mee post na Photoshop ma ọ bụ aka aka gị? Kedu usoro iji mee ihe? Anyị ga-atụle ihe abụọ ahụ n'ụzọ zuru ezu, mgbe ahụ, onye ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ ihe na-adọrọ ya mma. Kedu ka esi mee ihe ngosi na Photoshop Ọtụtụ mgbe ...
Kedu ihe ga-eme ka akwukwo akwukwo puta? Izu nke ihe odide, imewe, nsuso
Taa, ọ na-esiri m ike ịga n'okporo ámá ma zere inye onyinye iji nweta akwụkwọ akụkọ na aka nke onye na-eguzo n'akụkụ ọdụ ụgbọ oloko. Ọ ghọrọ ọkwa - ịlaghachi n'ụlọ, dịka ọmụmaatụ, na ...
Akụkọ banyere logo. Akara «BMW», «Skoda», «Audi», «Toyota», «Adidas»: gịnị bụ akụkọ ihe mere eme nke okike
Kwekọrịta, na ụwa nke ụdị epeepe ole na ole ka onye ọ bụla ga-amata, mụta site na mgbasa ozi mara mma na telivishọn ma ọ bụ akwụkwọ mgbasa ozi mara mma nke na-eche n'okporo ámá obodo ahụ. Kedu ka akụkọ ihe mere eme nke "logo" malitere ...
CPM - kedu ihe ọ bụ? Kedu otu esi eji CPM na mgbasa ozi?
Site na ịhazi mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-ekwupụta na netwọk, onye mgbasa ozi ọ bụla na-eme atụmatụ ego ya. Maka onye ahịa nke mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ dị mkpa ịhụ otú e si ekesa ego maka omume ya, ma a na-emefu ha maka nzube a ...
Otu esi emepụta ihe kachasị mma nke akwukwo akwukwo. Iwu na ndụmọdụ
Flyer bụ otu ụzọ dị ọnụ ala ma dị oke ọnụ iji bulie ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ na-arụ ma mgbasa ozi na ọrụ ozi maka onye ahịa ya. Ma oburu na odi mkpa inwe oganihu…
Ejiri aka aka ya: Nduzi nduzi
Ọ bụrụ na ị lee anya, enwere ọtụtụ mgbasa ozi dị iche iche a tụrụ mma na gburugburu. A na-arụ ya na ụlọ, ụlọ akwụkwọ, windo ụlọ ọrụ na ụlọ ahịa, ụfọdụ na-efe ya na windo nke ụgbọala. Ọ na-adabere ...
Akara: ụdị nke logos. Ndekọ nke ụlọ ọrụ. Ihe e kere eke
Ọrụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla malitere site na ịmepụta otu ụlọ ọrụ, isi ihe ndị dị na ya bụ mmepe nke logo ahụ. Ọ bụ ihe ngosi a nke na-egosi na nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na otu ụlọ ọrụ, gosipụta echiche ya na ...
Kedu ụdị mgbasa ozi
Iji nwee ọganihu ịzụlite azụmahịa gị, ọ bụ ahia, ọrụ dịgasị iche ma ọ bụ ihe ọzọ, ị ghaghị ibu ụzọ kwalite ya, mee ya ka ọ ghọta. Na nke a nke na-arụ ọrụ dị mkpa mgbasa ozi. Ọ bụ ya ...
Ụdị ụdị ihe atụ
Mgbasa ozi nke oge a aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị. Ọ na-eso anyị ebe niile: na-aga ọrụ, mgbe anyị na-ejegharị n'obodo ahụ, na njem, na ákwà ntanetị. Otu n'ime ụdị mgbasa ozi, ...
Ntughari “nkwalite” taa abanyela na ndu nwoke nke oge a. Site n'akụkụ niile anyị na-anụ mgbe niile “nkwalite”, “uwe ndị na-akwalite mbugharị”, “saịtị nkwalite”, “ihe ndị a na-akwalite mbuli elu”, “vidiyo nkwado”, “koodu mgbasa ozi” - ndepụta ndị a na-aga n'ihu.
Mpempe akwụkwọ - gịnị ka ọ bụ? Fọdụ ozi
Echiche nke "mpịakọta" sitere n'asụsụ German, okwu ahụ bụ "falsz" na ntụgharị okwu pụtara "uzo", "zholob". Echiche a agbanye mgbọrọgwụ n'asụsụ anyị n'enweghị mgbanwe. Tinye akwụkwọ mpịakọta na imepụta mbipụta akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ nta, ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,365.